mailaka Marketing - Mandefa fiarahabana tratry ny tsingerintaona, drafitra ho mpikambana, ary fanamafisana ny fanendrena ao anatin'ny dimy minitra raha tsy mampiasa serivisy marketing mailaka an'i Salonist. Ny marketing amin'ny mailaka dia fomba tsara hanatsarana ny fotoana voatondro ho an'ny serivisy salon sy spao. Ny salonista dia ny fanatsarana ny tahan'ny fitazonana ny mpanjifa sy ny fampidiram-bola avo kokoa ho an'ny orinasanao.
Fitantanana famerenana - Ny fanamarihana dia fomba mahafinaritra iray hanehoana amin'izao tontolo izao fa manao zavatra tsara ianao. Manampy anao hiantoka mpanjifa bebe kokoa izany ary hitazona azy ireo ho mahatoky. Rindrambaiko fandaharam-potoana amin'ny fandaharam-potoana amin'ny salonista dia ahafahanao mahazo valiny mivantana amin'ny mpanjifanao momba ny vokatrao sy ny serivisinao. Miaraka amin'ny bitsika nalefa tamin'ny alàlan'ny SMS sy mailaka tamin'ny finday avo lenta ho an'ny fitantanana mpanjifa sahaza azy ireo dia afaka mifandray amin'ny mpanjifanao ianao.